जिओनी ए सिरिजका स्मार्टफोन विश्वमै सबैभन्दा पहिले नेपाली बजारमा आउने - Mobiles Khabar
जिओनी ए सिरिजका स्मार्टफोन विश्वमै सबैभन्दा पहिले नेपाली बजारमा आउने
मोबाईलस् खबर १७ फाल्गुन २०७३, मंगलवार १८:२३
काठमाडौं, १७ फागुन । जिओनीले ए सिरिजका पहिलो स्मार्टफोनहरु जिओनी ए वान (Gionee A1) तथा ए वान प्लस (Gionee A1 Plus) सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले पहिलो पटक ए सिरिजमा नयाँ स्मार्टफोनहरु ल्याएको हो ।
यी दुबै स्मार्टफोनहरु सबैभन्दा पहिले नेपाल र भारतीय बजारमा सार्वजनिक हुनेछन् । नेपालमा भने यो मार्चको १५ तारिखको हाराहारी अर्थात चैतको शुरुवातीमा बजारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
यी दुबै स्मार्टफोनहरु मिड रेन्जका स्मार्टफोनको रुपमा बजारमा आउनेछन् । र नेपाली बजारमा करिब ३५ हजारमाथि मुल्यसहित नेपालमा आउने जिओनीको नेपाल स्थित कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा पहिले ए वान नेपालमा भित्रनेछ ।
कम्पनीकाअनुसार दुबै फोनमा ब्याट्री तथा सेल्फी क्यामरा निकै राम्रो रहेको छ । ए वानमा ४०१० एमएएचको ब्याट्री प्याक राखिएको छ भने ए वान प्लसमा ४५५० एमएएचको ब्याट्री राखिएको छ ।
कम्पनीले यी स्मार्टफोनहरुमा नयाँ १८ वाटका नयाँ अल्ट्राफास्ट चार्जिंग प्रविधि राखिएको जानकारी दिएको छ, जसले फोनलाई २ घण्टामा पुरै चार्ज गर्नेछ ।
जिओनी ए वान (Gionee A1)
ए वान स्मार्टफोनमा ५.५ इन्चको फूलएचडी एमोलेड प्यानेल प्रयोग गरिएको छ भने मिडिया टेकको हेलियो पी १० चीपसेट राखिएको छ । यसमा ४ जीबीको र्याम तथा ६४ जीबीको स्टोरेज राखिएको छ, जसलाई बढाउन सकिन्छ ।
जियोनी ए वानमा ड्यूल सिम सपोर्ट छ भने फोटोका लागि १३ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामरा तथा १६ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ । सेल्फीका लागि यसमा फ्रन्ट फ्ल्याश पनि रहेको छ । यो फोन एन्ड्रोयड नुगटका साथमा आउनेछ ।
जिओनी ए वान प्लस (Gionee A1 Plus)
जिओनी ए वान प्लसमा ६ इन्चको फूलएचडी आइपीएस एलसिडी डिस्प्ले राखिएको छ भने यसमा मिडिया टेक हेलियो पी २५ प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ । फोनमा ४जीबीको र्याम तथा ६४ जीबीको स्टोरेज रहेको छ । यो जिओनीको ड्यूल क्यामरा फोन हो । जसमा १३ मेगापिक्सेल तथा ५ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा छ भने सेल्फीका लागि २० मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा छ ।
ए वान प्लसमा अन्य फीचरहरुमा १८ वाटको अल्ट्राफास्ट चार्जिंग प्रविधि राखिएको छ ।
जिओनी ए वानको मुल्य ३४९ यूरो तथा ए वान प्लसको मूल्य करिब ४९९ यूरो विश्व बजारका लागि राखिएको छ ।
Gionee A series Gionee A1 Gionee A1 Plus १७ फाल्गुन २०७३, मंगलवार १८:२३
Previous: जिओनीका सर्भिस सेन्टर पाँच स्थानमा, क्षेत्रियरुपमा सेवा बिस्तारको उद्धेश्य
Next: ह्वावे पी १० र पी १० प्लसको घोषणा, फ्रन्ट क्यामरामा पनि लाइकाको लेन्स
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १२:२९
हुण्डाइ ओपन गल्फ टुर्नामेन्ट २०१८ हुने
दूरसंचार प्राधिकरणलाई अदालतको अन्तरिम आदेश, युटिएलको काम ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको जिम्मा
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १२:२२
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १२:१५
११ बैशाख २०७५, मंगलवार २३:३४
Happy International #GirlsInICTDay. Let's support and encourage girls and women to involve more and more in #ICT. ‘… https://t.co/vIJkG320GG6hours ago
जियोनीका नयाँ स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक हुँदै, नयाँ फीचरसहित अाउने https://t.co/Tw7CHJTJyy 2018/04/22
भीभो भी नाइन यूथ स्मार्टफोन नेपालमा आउने, फुल एचडीप्लस एमोलेड डिस्प्ले र ड्यूल रियर क्यामरा https://t.co/S7MIfgEzaE 2018/04/22